Soo Gudbi Martech Zone Maqaalka | Martech Zone
Soo Gudbi Martech Zone Qodobka
Fadlan ha weydiinin inaad soo gudbin karto maqaal, kaliya halkan ku soo gudbi maqaalka. Ma haysto waqti aan dib ugu eego codsiyada.
Waxaan hayaa xirmo lacag bixin ah si aan u kordhiyo gaadhista astaantaada sidoo kale:
Hadafkaagu haduu yahay dib u xirid, fadlan bax.
Waa inay noqotaa tiknoolajiyad suuqgeyn ah. Ma ahan wararka shirkadaha, dallacaadaha, ama maalgashi
Noocyada: 700 ilaa 2,000 oo erey, sharax dhibaatada, qaababka ugu fiican ee xalinta dhibaatada, iyo muuqaalka guud ee xalkaaga. Ku dar xiriiriye halkaasoo qof uu qaadi karo tallaabada xigta - demo, soo dejin, iwm.
Screenshots, jaantusyo, astaan, iyo fiidiyoow dhammaantood si heer sare ah ayaa loogu talinayaa (ugu yaraan hal).
Xigasho ka timid aasaasaha ama hogaamiyaha fikirka ka ah shirkadda waa taabasho weyn.
Kiis adeegsi ama sheeko macmiil ayaa si aad ah u xoog badan.
Haddii aad jeceshahay inaad noqoto qoraa, waa inaan haysanaa a cinwaanka iimaylka saxda ah ee qoraaga (ma ahan shirkad PR) waana inay ka diiwaan gashan yihiin sawir saaran Gravatar ama sawir lagu daro.
Adigu xor ayaad u tahay inaad ku darto wicitaan ficil ah oo aad ugu soo celiso bartaada demo, soo dejiso, iwm.
Haddii aad jeclaan laheyd inaad dhex gasho qalab, nala soo socodsii. Waxaan haynaa dhowr qalab oo leh heshiisyo gudbin ah shirkadahaas.
Halkan waxaa ah tusaale adag oo aan ka soo shaqeynay Act-On Software.
Waxaan xor u nahay in aan wax ka bedelno waxyaabaha ku jira, qaabeyno, ka saarno, cusbooneysiino, u dirno, ama aan wax kale ku qabanno si aan u hubinno inaan u ilaalino daabacaad tayo leh akhristayaashayada.
MM jabin DD ku garaac YYYY
Kahor Intaadan Gudbin*
Soo gudbinta foomkan, waxaad ogolaatay DHAMMAAN waxyaabaha soo socda.
Lacag layguma siinayo in aan dhigo backlinks si aan u horumariyo qiimeynta raadinta
Waxaan soo gudbinayaa maqaal asal ah oo aan la daabicin, laguna qaybin meelo kale
Waxaan ku fahmay anigoo soo gudbinaya nuxurkan in la tafatiri karo ama laga saari karo wakhti kasta ogolaansho la'aan aniga
Waxaan fahansanahay in aysan jirin dammaanad qaad in maqaalka la daabici doono ama jadwalka daabacaadda
Shirkad, Badeecad ama Adeeg*
Ma ku jirtaa maqaalka dhabta ah?*
Dhammaan qodobbada waa inay ahaadaan 100% asal ah oo aan lagu dhajin goob kale. Sidoo kale waa inaad ku dartaa magaca qoraaga, cinwaanka iimaylka, iyo madaxa.
Maya - codsigan waa suuragal in la tirtiro
Haa - Waxaan ku lifaaqay wax kasta oo aad codsatay.
Haa - laakiin waxaan rabnaa Douglas Karr inuu noqdo qoraaga
Cinwaanka Emailka Qoraaga
Mawduucyada qoraaga LAGU aqbali maayo iyada oo aan qoraaga cinwaanka emaylkiisa toos loo qorin. Ka reeban
Qoraaga LinkedIn URL
2 ilaa 4 weedho.
Sawir-qaade, Logos, Sawir-qaadis iyo/ama Qoraallo
Noocyada faylasha ee la aqbalay: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. Cabirka faylka: 50 MB.
Maqaal kasta oo khad ah wuxuu u baahan yahay magac dhab ah, cinwaanka emaylka tooska ah ee qoraaga, madax xanuun, iyo taariikh nololeedka 2 illaa 4. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa cinwaanada cinwaanka bulshada. Fadlan dir oo soo rar.
Ma haysaa dalab ama wicitaan-waxqabad?*
Haddii aad dalab ku bixiso maqaalkaaga, waxaad heli doontaa jawaab ka wanaagsan. tusaale. U adeegso nambarka MARTECHZONE 10% dhimis. Fadlan bixi xiriiriyaha aad u socoto.
Haddii aad haysato barnaamij gacansaar ah oo aan ku biiri karno, waxay u badan tahay inaan soo daabacno tan.
Intaad halkan joogto ...
Majeceshahay inaad rukumo wargeyskeena?
Wax ka beddel